110 jir GUUR DOON ah . - Wargeyska Faafiye
110 jir GUUR DOON ah .
Nin 110 jir ah oo u dhashay dalkaasi Malaysia ayaa raadinayey haweeney uu guursado,wuxuu sheegay in uu ogolaansho ka helay haweeney 82 jir ah,sida uu sheegay wargayska soo baxa dalkaasi.
Ninkan oo la yidhaah Ahmad Mohamad Isa, ayaa leh 20 carruur ah iyo 40 uu awoowe u yahay, sida uu ku warramay wargayska maalinlaha ee kusoo baxa afka Malay ga ee la yidhaah Utusan Malaysia wuxuuna sheegay ninkaasi inuu doonayo haweeney xanaanaysa oola joogta marwaliba.
Warbixintan ayaa soo jiidatay dadka kadib haweeney 82 jir ah oo la yidhaah Sanah Ahmad,oo carmal ahayd muddo 30sano ah oo ah hooyo dhashay 9 carruur,ay ka codsatay inay isguursadaan ayna ka codsatay carruurteeda inay la xidhiidhaan Ahmed qoyskiisa si loo diyaariyo guurkooda.
“waxba igama quseeyaan qofka ay tahay iyadu,hadii ay ii diyaarin karto,” ayuu Ahmad u sheegay wargayska, wuxuuna ku daray inuu aad ugu farxay codsigeeda aadna ula yaabay markii uu newska maqlay halka gabadhiisana ay kala xaajoon doonto arrintan qoyska haweeneydaasi.
“nolol cidla ah ayaanku noolaa waana cabsan jiray markaan seexanayo. Hadii ay xaas ii joogto iyadaa i xanaanayn lahayd,” ayuu ku daray Ahmed ooh ore usoo guursaday shan dumar ah wuxuuna ku daray inuu qabo dhibaato ah in uusan aad waxba umaqlayn iyo aragtidiisa oo aad u yar,ayuu u sheegay wargayska.
Afar kamida xaasaskiisii hore way dhinteen halka tii shanaadna uu furay. Sanah ayaa u sheegtay wargayska in uu Ahmed aad uga heshay sababtuna ay tahay isagoo magac ahaan iyo muuqaal ahaan u eg ninkeedii hore.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDaawo Video Cajiib ah : Nin La lagdamaya 5 Libaax.Soomaaliya iyo Bankiga Adduunka oo heshiis kala saxiixday .Jeddah suicide bomber was Pakistani.Xildhibaanno wada Mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaare C/wali…..Shariif Xasan oo diiday doorashada